Home Wararka DEG DEG:Guddomiyaha G/Shabeellaha hoose iyo Guddomiye lasocday oo ku dhaawacmay Qarax lala...
DEG DEG:Guddomiyaha G/Shabeellaha hoose iyo Guddomiye lasocday oo ku dhaawacmay Qarax lala beegsaday
Wararka naga soo gaaraya degaanka Siinka dheer ee duleedka Magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in Qarax Miino lala eegtay gawaari ay saarnaayeen Mas’uuliyiin ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose.
Sidda ay xaqiijiyeen Mas’uuliyiin ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ,dadka Qarax lala beegsaday ayaa waxaa ka mid ahaa Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose.
Guddoomiyeyaasha Shabeelaha Hoose iyo Ceelasha Biyaha Maxamed Ibraahim iyo Ayaan Xasan ayaa lagu dhaawacay qaraxa.
Waxaa loola soo cararay Isbitaal ku yaalla Magaalada Muqdisho, halkaasi oo xaaladdo Caafimaad lagu dabiibaayo.
Qarax kale oo ka dhacay Macaani ayaa lala eegtay gaari ay saarnaayeen ciidan Millitari ah, qaraxyada daqiiqado ayay kala horeeyeen sidda ay xaqiijiyeen dadka degaanka.
Wixii kusoo kordha kala soco halkan
Previous articlefarmaajo iyo Khayre oo Ceeb dhexda kataagan kadib soo deyntii Qalbi dhagax
Next articleDowlad Goboleedyadda oo ka soo horjeestay qorshaha W. Isgaarsiinta ee dowlada Federalka
Xildhibaan sheegay in uu ka baxay Xisbigga (UPD)
Dilalka Mooto Bajaajleeyda oo Muqdisho dar-dar uga Socdo!!